၅ ပွဲစဉ် ၃ တွင် Candy Crush Saga နေရာတွင်အစားထိုးရန်။ | Androidsis
Candy Crush Saga မှအနားယူလိုသောပရိသတ်များအတွက် match-5 ဗီဒီယိုဂိမ်း ၅ ခု
Manuel Ramirez | | Candy Crush, Android ဂိမ်းများ, လဲ tutorial
Candy Crush Saga သည်ပွဲစဉ် (၃) ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့် Google Play စတိုးကိုသိမ်းပိုက်ထားသည့်ဂိမ်းအားလုံးနီးပါးကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားခြင်းကြောင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အများအပြားမှုတ်သွင်းနေကြသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းစဉ်ကိုဖွင့်ပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်သကြားလုံးနှင့်သကြားအနည်းငယ်မှအနားယူလိုပါကရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးတစ်နေ့တွင်၎င်းတွင်ရှိသောကယ်လိုရီများအတွက်အကြိုက်စားခြင်းကိုရပ်တန့်သွားပါကကျွန်ုပ်တို့တွင် KING ဂိမ်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများရှိသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ငါ Candy Crush Saga ပရိတ်သတ်များအတွက်ခဏအနားယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်သည့်ဂိမ်းငါးခုစာရင်းကိုဖွင့်တော့မည်။ သူတို့မှာသကြားလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ၊ ပျက်စီးမှုများစွာကိုပြုလုပ်နေသော Candy Crush Saga အားမိနစ်အနည်းငယ်အစားထိုးနိုင်စေရန်၊ သူတို့၏ဆောင်ပုဒ်၊ ဂရပ်ဖစ်စတိုင်နှင့်သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်အံ့အားသင့်စေမည့်အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းငါးခု၊ ရှေ့မှောက်၌အချိန်ကြာမြင့်စွာ။
1 Bejeweled ကြယ်များ
3 Candy Crush ဆိုဒါ Saga
4 အသီး Nibblers
ဖြစ်နိုင်သည် နောက်ဆုံးအလေးနက်ဆုံးအလောင်းအစားများထဲမှတစ်ခု Candy Crush Saga ကိုသူမရဲ့အကြွင်းမဲ့လွှမ်းမိုးမှုကနေဖယ်ရှားပစ်ဖို့။ လာသည် အလွန်လူကြိုက်များဂိမ်းကနေ ဒီပွဲစဉ် -၃ ဂိမ်းအမျိုးအစားနှင့်၎င်း၏ developer များအသင်း၏ကောင်းသောအလုပ်သည်။
သကြားလုံးတွေအစားဒီမှာတစ်ခုလုံးရှိတယ် ရတနာအမျိုးမျိုး ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအကျိုးအရှိဆုံးဘယ်လိုစုပေါင်းနိုင်မလဲဆိုတာသိရမယ်။ ၎င်းတွင် Candy Crush ၏အကောင်းဆုံးအချက်များရှိသည်၊ ၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အမြင်အာရုံဆောင်ပုဒ်တွင်ပါဝင်သည်။ ထိုပေါင်းစပ်မှုများအားလုံးအောင်မြင်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုဆက်လက်ကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတုန်လှုပ်စေသောအကျိုးရလဒ်ကောင်းများကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Lo ၎င်း၏အဆင့်ဆင့်နှင့်အမျိုးမျိုး၏ပျော်စရာ အဲဒါကိုယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးပွဲစဉ် -၃ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်စေပါ။ သင်က Play Store မှအခမဲ့ရှိသည်။
Bejeweled Stars - Jewell Match ၃
ကျနော်တို့ဖြည့်ဆည်းကြလိမ့်မည်သည့်တစ်နှစ်မတိုင်မီ ပိုကီမွန်ကိုလိုက်ရှာမှတိုးပွားလာအဖြစ်မှန် လမ်းများသို့သွားပြီးမော်ကွန်းတိုက်ပွဲများမှအခြားကစားသမားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တွင်Pokémon Go beta ကိုကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်ထိုဆန္ဒကိုအစားထိုးနိုင်သောပွဲစဉ် ၃ ရှိသည်။
En ပိုကီမွန်မွှေနှောက် သင်သည်တတ်နိုင် သုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပိုကီမွန်တက်တန်းစီ ဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်၊ သင်၌ကစားရန်အဆင့်များစွာရှိသည်။ သင်ကပိုကီမွန်ကိုရွေးချယ်ပြီး combo ကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်၎င်း၏ ဦး တည်ရာကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်နည်းဗျူဟာနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအသေးစိတ်အချက်အချို့ရှိသည်။
Se King ၏ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်အကွာအဝေး, ဒါပေမယ့်ပိုကီမွန်နှင့်ဤဂိမ်းအမျိုးအစား၏ပရိသတ်များအတွက်အနည်းဆုံးပြုလုပ်ရန်မှာမရှိမဖြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိုကီမွန် Shuffle မိုဘိုင်း
ရေးသားသူ: အဆိုပါ Pokemon ကုမ္ပဏီ
Candy Crush ဆိုဒါ Saga
အိုးအဘယ်သူမျှမကအခြား Candy Crush! ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့်ဒီဟာကိုပြောင်းလိုက်တယ် ပုလင်းအချို့အတွက်သကြားများအတွက်သကြားလုံး ဆိုဒါ၏။ King ၏ပထမဆုံးဂိမ်းကိုကျော်ကြားစေသည့်အရာများနှင့်ကွဲပြားသောဂိမ်း modes များကြောင့်ဤနေရာတွင်ထူးခြားသည်။ သကြားလုံးများကိုရေခဲနှင့်ထိတွေ့နိုင်ခြင်း၊ သကြားလုံးများပိုမိုချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်ပျားရည်ကို Candy Bears မှလွှတ်ပေးရန်နှင့်ထိုသကြားလုံးများကိုထိုရယ်စရာကောင်းသော၊ အန္တရာယ်ရှိသောတိရစ္ဆာန်၏ပုံသဏ္inာန်ထဲထပ်မံကယ်တင်ရန်ခရမ်းရောင်ဆိုဒါများကိုသွန်းလောင်းနိုင်သည်။
သင်ရှိသည် ခေါင်းဆောင်ဘုတ်အသစ်များဇယား ပြီးတော့သင်တက်ဘလက်နဲ့စမတ်ဖုန်းကတဆင့်ဂိမ်းတွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပါတယ်။ သူ၏ပြိုင်ဘက်များအတွက်အလွန်ခက်ခဲစေရန် King မှနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်လောင်းခြင်း။
Rovio စတင်ခဲ့သည် ဒီပွဲစဉ် -၃ ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်နှစ်က များစွာသောဘလက်ဘယ်ရီနှင့်ငါတို့တည်ရှိမှုကိုဖြည့်ပါ, အသီးများနှင့်အရသာရှိလှသောအသီးများ၊
ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းပညာဆိုင်ရာအရည်အသွေးခံစားပါ အတော်လေးအမြင်အာရုံမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သော အဆိုပါကစားစရာရှုထောင့်၌ကြီးသောပျော်စရာဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အသံ interchanged နေကြသည်။ Rovio သည်ပွဲအပြီးသုံးပွဲတွင်ကာလရှည်ကြာစွာကမ္ဘာတစ်လွှားမှကစားသမားများထံမှကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကိုဆက်လက်ရရှိခဲ့သည်။
မ de de niveles 200 သစ်သီးဝလံတွေအဓိကထားတဲ့ဒီဂိမ်းဘုတ်မှာပေါင်းစပ်မှုတွေရှာဖွေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုစစ်ဆေးဖို့သင့်ကိုသူတို့စောင့်နေတယ်။ အခြားသူများကဲ့သို့သင်၌၎င်းကို Play Store မှအခမဲ့ရရှိသည်။
ရေးသားသူ: Rovio Entertainment ကကော်ပိုရေးရှင်း
una အများဆုံးစပ်စုခြင်းနှင့်လိမ္မာသောအလောင်းအစားများ အသီးများသို့မဟုတ်သကြားလုံးများကိုပေါင်းစပ်မည့်အစား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်စရာနှင့်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းတွင်သူ့အားစောင့်စားနေသောအလယ်ခေတ်ကမ္ဘာအားရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏သူရဲကောင်းအားခွင့်ပြုနိုင်ရန်မြေပြင်အနေအထားအမျိုးမျိုးကိုချိန်ညှိရမည်ဖြစ်သည်။ Jewel Road လို့ခေါ်ပါတယ်.
လခြမ်းမွန်းဂိမ်းများကိုတာဝန်ယူသည် ငါတို့ကိုအခမဲ့ယူခဲ့ Play စတိုးမှအဖျော်ယမကာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းလေ့လာရမည့်ကမ္ဘာများ၏ဂီတများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းရန်။ မူလပွဲစဉ် -၃ သည်ကမ္ဘာကြီးကိုထိုမူလအပိုင်းအစများနှင့်ပြန်လည်စည်းညှိရမည်။ ယခုအချိန်တွင်၏အကောင်းဆုံးပွဲစဉ် -3s တစ်ခုမှာ။
ရတနာလမ်း - စိတ်ကူးယဉ်ပြိုင်ပွဲ ၃
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Candy Crush Saga မှအနားယူလိုသောပရိသတ်များအတွက် match-5 ဗီဒီယိုဂိမ်း ၅ ခု
Slash၊ Google ရှာဖွေမှုကို Allo နှင့် Gboard တို့နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော
Google မှတရားဝင် Android အထောက်အပံ့ကို Raspberry Pi3သို့ယူဆောင်လာသည်